Asa-tanana misy akora simika: toro-hevitra sy hevitra | Fanavaozana maintso
Asa-tanana amin'ny akora namboarina
Misy fomba maro hanararaotana ireo fitaovana izay tsy hampiasainay intsony. Ny iray amin'izy ireo dia ny manao asa tanana misy akora simika. Ny asa tanana dia mora dia ny mamela anao hamonjy amin'izao fotoana sarotra indrindra ara-toekarena izao. Ho fanampin'izany, isika dia afaka manamboatra asa-tanana amin'ny akora voaverina ao an-trano nefa tsy mila mividy na inona na inona ary miaraka amin'ny fanampian'ny fianakaviantsika sy ny namantsika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao hoe iza no asa-tanana tsara indrindra misy akora simika sy ny fomba tokony hanaovanao azy ireo.
1 Asa-tanana amin'ny akora namboarina
2 Asa-tanana amin'ny akora namboarina handravaka ny trano
2.1 Jiro misy tavoahangy plastika
2.2 Talantalana, ankamantatra, horonana ary jiro
3 Asa-tanana misy akora simika: araraoty ireo zavatra taloha
Raha te-hihary tahiry ao an-trano ianao, dia tsara kokoa ny manaova asa tanana amin'ny akora namboarina. Ity dia fomba iray tsy dia lafo loatra hanamboarana ny fanaka an-trano vita amin'ny tenantsika ihany. Ho fanampin'izany, ity fomba ity dia manampy antsika hampifanaraka azy amin'ny tsirontsika. Azontsika atao ihany koa ny mamorona fitaovana azo ampiharina sy ilaina ho an'ny trano. Raha ampiantsika izao rehetra izao amin'ny fanaovana asa-tanana amin'ny akora namboarina dia hitahiry vola ihany koa isika ary hampihena ny fiantraikan'ny tontolo iainana vokarintsika.
Azo antoka fa hanana tavoahangy fitaratra ianao, gazety taloha, sns. Tsy manao na inona na inona isika fa manipy azy ireo ao anaty fitoeran-javatra. Noho ireo hevitra homenay anao dia azonao atao ny manome azy ireo fiainana faharoa.
Asa-tanana amin'ny akora namboarina handravaka ny trano
Andao hojerentsika hoe inona ireo asa-tanana lehibe misy akora simika azontsika atao mba handravahana ny tranontsika. Ireo asa-tanana ireo Tsotra ihany izy ireo, mora jerena ary mora vidy. Raha ny marina dia azonao atao ny manova ny endrika ankapobeny amin'ny tranonao matetika nefa tsy mandany vola be. Andao hojerentsika hoe inona ireo asa-tanana ireo.
Jiro misy tavoahangy plastika
Izy io dia iray amin'ny asa tanana tsotra indrindra, miasa indrindra izay mampifangaro ny famoronana ny olona tsirairay amin'ny fomba izay hatsangana. Ho fanampin'izany, manampy amin'ny fitafiana ny zoron'ny tranonao amin'ny fomba feno tsy mila mandany vola. Tsy vitan'ny manangona vola fotsiny isika fa manampy ny tontolo iainana ihany koa amin'ny fanomezana fiainana ny tavoahangy plastika.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mandoko ny tavoahangy ny loko tadiavinao ary ampio ny efijery amin'ny lalao. Tsy io ihany koa no fitaovana ahafahana mamorona jiro. Izy io koa dia azo amboarina amin'ny vilany vifotsy, amina labiera na amina soda. Mba hanaovana ireo jiro ireo dia mila foana fotsiny ianao, fandavahana handavaka lavaka, ny loko ilaina ary ny jiro tonga rojo. Ireo jiro ireo dia mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny hazo krismasy.
Talantalana, ankamantatra, horonana ary jiro
Ny kodiarana averina indray dia iray amin'ireo fako be indrindra amin'ny tanàn-dehibe. Mety manana kodiarana tranainy eny an-tànanao ianao ary afaka manamboatra talantalana tsara tarehy miaraka amin'izy ireo. Ity talantalana ity dia mety tsara hapetraka ao anaty garazy na ho an'ny efitran'ilay zaza. Amin'ny kodiarana fotsiny, ny hazo fisaka sasany ary ny fahaiza-manao DIY azonao atao eo am-pelatananao. Azonao atao ny mamela ny loko voajanahary na mandoko azy amin'ny loko isan-karazany.
Azo antoka fa very ankamantatra ao anaty vatasarihana ianao miaraka amin'ireo sombin-javatra tsy hita na efa nataonao imbetsaka. Azo ampiasaina izy io mba hahazoana endrika mahaliana. Ireo endrika ireo dia manana fampiharana marobe ihany koa. Ohatra, azonao atao ny mamorona tarehimarika toy ny satroboninahitra mety amin'ny hazo krismasy.
Azontsika atao ihany koa ny manamboatra ireo kofehy vita amin'ny kofehy efa nampiasaina nandritra ny taona maro nandritra ny zaitra. Miaraka amin'ireo kofehy ireo dia afaka manamboatra asa-tanana marobe toy ny sary haingon-trano ho an'ny trano.
Azo ampiasaina koa ny tatatra an-dakozia sy ny gratera hanamboarana asa-tanana amin'ny akora namboarina. Ireto fitaovana ireto dia manana fampiasana vitsivitsy hafa noho ny fanosotra fromazy sy legioma hafa. Izy ireo dia mety ho tonga lafatra amin'ny famoronana jiro ary toa manintona izy ireo. Afaka manao toy izany koa ianao amin'ny tatatra an-dakozia sy fitaovana hafa. Tsy maintsy apetrakao amin'ny valin-drihana fotsiny sy ny jiro ao anatiny ny fitaovana. Hisy vokany tena manaitra izany.
Asa-tanana misy akora simika: araraoty ireo zavatra taloha
Ireo siny feno voninkazo dia zavatra sisa tavela amin'ny trano rehetra izay misy zavamaniry na zaridaina anaty trano. Tsy vao izao ianao no mahita jiro ao anaty vilany voninkazo. Mba hanaovana izany dia hampiasa jiro efa tonta efa antitra amin'ireo izay misy filament isika. Ireo takamoa ireo dia efa tonta tanteraka fa afaka omena fiainana faharoa. Ireto ny fitaovana ilaintsika hanaovana vilany misy takamoa: ireto ny jiro, ny plastika ary ny silika mafana. Safidy tanteraka ity fitaovana farany ity.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manala ny sombin-jiro ary noho izany dia hampiasa ny pliers isika. Vantany vao nosokafantsika ny jiro, dia esorinay ilay sombin-kazo manitra izay manana loko mainty. Matetika io tapany afovoany io dia miorina amin'ny tapany ambony amin'ny trano mimanda. Rehefa nesorinay izy dia homentsika fanapahana maromaro miaraka amin'ny pliers mitovy mba hahafahana mamaky ity vera kely ity. Ilay sombin-javatra no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ireo filament izay hampiasaintsika. Angamba ity no ampahany sarotra indrindra dia ny asa-tanana satria tokony ho malina tsara amin'ity faritra ity ianao. Sombina marefo izy io ary raha sendra mafy loatra isika dia afaka mamaky ilay jiro manontolo.
Rehefa tapahinay ny tapany afovoan'ny vera dia manandrana manafoana ny faribolana manontolo amin'ilay faribolana izahay. Ity no fomba ahafahantsika manala ireo tampon'ny tampony rehetra izay namboarina taorian'ny kapoka. Miaraka ampifamadihana ao anatiny ilay ampahany dia hijanona miaraka amin'ireo filament ao anaty jiro izy io. Tonga izao ny fotoana hamoahana azy ireo. Ny fomba tsara indrindra hametrahana ny jiro dia ny fivadibadika ary makà fonosana landihazo atsoboka ao anaty alikaola mba hanadio ny vera manontolo amin'ny takamoa na ao anatiny na any ivelany.
Raha tiantsika hijoro ny jiro, dia tsy maintsy maka basy silikola isika ary hametraka tadivavarana marobe eto ambany. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa ireo ranomaso silika miraikitra amin'ny tena. Ny dingana farany dia ny fametrahana ireo voninkazo ao anatiny ary afaka mametraka zavamaniry voajanahary amin'ny rano kely na lamba na fanahafana ireo zavamaniry plastika ianao. Raha te hanantona azy ianao dia tadiny landihazo ihany no mila fonosinay manodidina ny satroka ary apetaka eo amin'ny zoron'ny efitrano.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny asa tanana sasany tsara indrindra amin'ny fitaovana fanodinana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Asa-tanana amin'ny akora namboarina
Fumigate zaridaina legioma
Fampiasana manidina amin'ny tontolo iainana